အမေရိကန် သံရုံးရှေ့မှာ ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ ရှိနေခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ – Zartiman
ဒါကတော့ အမေရိကန် သံရုံးရှေ့ မှာ မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံက ပြည်သူ တွေနဲ့အတူ ထိထိရောက်ရောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေ တဲ့ ပုံလေးတွေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံလေး တွေအပြင် ” I also makeastrong play in op pos it ion to military coup. All the generations in myanmar know what we faced and lost in military misrule. We cannot let that happen again. I am proud to paricipate in this protesting. ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလည်း ရေးသားထားတာ ကြည့်ရှု့စေဖို့အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ နန်းမွေစံကတော့ အနုပညာ ဝါသနာကြီးသူဖြစ်လို့ ဆရာဝန်ဘဝကို စွန့်လွတ်ပြီး ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရပ်တည် လျှောက်လှမ်း နေ သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ သူမရဲ့ အနုပ ညာ အရည်အချင်း တွေကလည်း ထူးချွန်တာဖြစ်လို့ အချိန် ခဏလေး အတွင်း အောင်မြင် မှုတွေ များစွာ ရရှိခဲ့တာပါ။ နန်းမွေစံ က Photo modelတစ်ယောက် အနေနဲ့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက် ရှိတာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေက ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ရင်သပ် ရှုမောဖွယ်ကောင်းတာကြောင့် ပုရိသပရိသတ် တွေကြား ရေပန်းစား လူကြိုက်များ လျှက်ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ နန်းမွေစံက လက်ရှိမှာ တော့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှု တွေကို ခေတ္တရပ်နားထား တာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်း ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မနက် ပိုင်းက သူ မ ရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် အကောင့်မှာလည်း ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတော့ အမရေိကနျ သံရုံးရှေ့ မှာ မျောဒယျလျ နနျးမှစေံက ပွညျသူ တှနေဲ့အတူ ထိထိရောကျရောကျ ဆန်ဒထုတျဖျောနေ တဲ့ ပုံလေးတှေ ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပုံလေး တှအေပွငျ ” I also makeastrong play in op pos it ion to military coup. All the generations in myanmar know what we faced and lost in military misrule. We cannot let that happen again. I am proud to paricipate in this protesting. ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလညျး ရေးသားထားတာ ကွညျ့ရှု့စဖေို့အတှကျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ နနျးမှစေံကတော့ အနုပညာ ဝါသနာကွီးသူဖွဈလို့ ဆရာဝနျဘဝကို စှနျ့လှတျပွီး ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ရပျတညျ လြှောကျလှမျး နေ သူတဈယောကျပဲ ဖွဈ ပါတယျ။ သူမရဲ့ အနုပ ညာ အရညျအခငျြး တှကေလညျး ထူးခြှနျတာဖွဈလို့ အခြိနျ ခဏလေး အတှငျး အောငျမွငျ မှုတှေ မြားစှာ ရရှိခဲ့တာပါ။ နနျးမှစေံ က Photo modelတဈယောကျ အနနေဲ့ အနုပညာ အလုပျတှကေို ဆကျလကျလုပျကိုငျလကျြ ရှိတာ လညျး ဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေ ဆှဲဆောငျမှုရှိပွီး ရငျသပျ ရှုမောဖှယျကောငျးတာကွောငျ့ ပုရိသပရိသတျ တှကွေား ရပေနျးစား လူကွိုကျမြား လြှကျရှိတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ နနျးမှစေံက လကျရှိမှာ တော့ ဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနအေရပျရပျကွောငျ့ အနုပညာလှုပျရှားမှု တှကေို ခတ်ေတရပျနားထား တာဖွဈပွီး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ပူးပေါငျး ရပျတညျနတော ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနေ့ မနကျ ပိုငျးက သူ မ ရဲ့ လူမှု ကှနျယကျ ဖဘှေ့တျ အကောငျ့မှာလညျး ပုံလေးတှကေို တငျပေးလာခဲ့ပါတယျ။
ပုရိသတွေ အခါခါ ပြန်ကြည့်ချင်လောက်အောင် ရင်ဖိုစရာ ဖြစ်နေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ ရဲ့ ဗီဒီယို
ပုရိသတွေအတွက် ထိထိမိမိ ရှိလွန်းတဲ့ အမိုက်စားပုံတွေတင်ပေးလိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ